कहाँ आयो ग्याँस ? दाउरा पनि सहज छैन्
बिशाल कार्की, चैत २०७२ । ‘स्टक ग्याँस राखिएन । सकिएकै दिन लागेर सिलिण्डर लाइनमा राखेको हुँ । अरु समयमा त हिटर राइस कुकरबाटै खाना पकाउँछु । लोडसेडिङको समय पर्याे भने चाहीँ
सडकमा ढुंगा खोपेर जिविकोपार्जन
केशव भुल, चैत २०७२ । “अरु मान्छेलाई त धेरै काम आउछ पढेलेखेका छन् तर के गर्नु आफुले पहीले लेखपढ गरीएन, यो भन्दा अरु काम गर्न जानेकै छैनौ हामीले अब बाच्दा सम्म यही
रघुनाथ बजगाँई, चैत २०७२ । एकले अर्कोको कार्यदिशामा सामेल हुनुपर्ने अवस्थामा पार्टी एकता हुन सक्तैैन । क्रान्तीकारी माओवादी एकीकृतमा विलय हुन नचाहने र एकिकृतले क्रान्तीकारीको कार्यदिशामा सहमती जनाउने अवस्था छैन । ब्यवस्थापिका
रघुनाथ बजगाँई, चैत २०७२ । स्वतन्त्र संस्थाका नाममा ग्रामिण भेगका गाविस/वडा देखी राजधानी काठमाण्डौँ महानगरपालिका सम्म बिभिन्न खाले संगठन खोलीएका छन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जति राजनितिक दलहरु छन, सबैले आफ्ना
जनचेतना संगै बदलिएको खाम्चा
प्रकाश बस्याल, चैत २०७२। नवलपरासीको चोरमारा बजारबाट करिब ५ किलो मिटर उत्तर तर्फ खाम्चा टोल रहेको छ । बसन्तपुरबाट पारी मैनाघाट गाबिसको वार्ड नं. ९ मा जंगलको घाचमा रहेको खाम्चा टोलमा ९५ प्रतिशत
असफल प्रेमका बिच स्वीटको आशा र मेरो खोजी
सुमी दर्लामी, फाल्गुन २०७२ । जसका लागी मैले मेरो घरपरिवार ६ /७ बर्ष देखी त्यागेर काम गर्दै बसेको छु । जसको लागी यो सब गरे आज उसले छाड्यो घर जाउँ, जाने बाटो छैन्
आस्था केसी ‘संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी’ भनिएको मानिस जीतको उन्मादमा केसम्म गर्न पछि पर्दैन भन्ने कुरा केही दिनअघि भारतको